यस्तो श*क्तिशाली प्रविधिमैत्री बन्यो नेपाल एयरलाइन्स, भित्र्यायो नयाँ अत्याधुनिक सफ्टवेयर !! | Public 24Khabar
Home News यस्तो श*क्तिशाली प्रविधिमैत्री बन्यो नेपाल एयरलाइन्स, भित्र्यायो नयाँ अत्याधुनिक सफ्टवेयर !!
यस्तो श*क्तिशाली प्रविधिमैत्री बन्यो नेपाल एयरलाइन्स, भित्र्यायो नयाँ अत्याधुनिक सफ्टवेयर !!
व्यस्त दैनिकीका कारण खानपानमा नियमितता नहुँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् ।
स्वास्थ्यमा देखिएका यस्ता विविध समस्या समाधानका लागि बिहान उठ्नेवित्तिकै केही समय आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खानुहोस् ।
यसले तपाइँको स्वास्थमा निकै राम्रो फाइदा पुर्‍याउनेछ । यस्ता छन् फाइदाहरु-
पाचन प्रणालीलाई सुधार्छ
पाचन शक्तिलाई मजबुत बनाउन बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ । यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ ।
कागतीमा रहेको एसिडले पाचनप्रणालीलाई मजबूत पार्न मद्दत गर्छ र अवान्छित विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्छ । यसका अलावा महले एक एन्टीब्याक्टेरियलको रुपमा काम गर्छ र शरीरमा रहेको कुनै पनि प्रकारको संक्रमण हटाउँन मद्दत गर्छ ।
लिम्फेटिक सिस्टमको सफाईमा सहयोगी
मुख स्वास्थ्यमा सुधार
मूत्रबर्द्धक रुपमा कार्य गर्छ
महमा शक्तिशाली एन्टीब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । यसमा कैयौ प्रकारको संक्रमण हटाउने क्षमता हुन्छ । कागती, तातो पानी र महको मिश्रणले मूत्रमार्गलाई सफा गर्ने । यो सबैभन्दा राम्रो तरिका हो । युटिआई या मूत्रमार्ग संक्रमणबाट पीडित महिलाका लागि यो मिश्रण वरदान साबित हुन्छ ।
इनर्जी लेबल बढाउँछ
पोषक तत्व र भिटामिनले भरपूर
रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत हुन्छ
Previous articleमेरो श्री मान खोस्छेस भन्दा पर्यो ठु लै लफ*डा, अन्तरबार्तामै सौता सौता बीच चर्का*चर्की, झन्डै
Next articleयस्तो श*क्तिशाली प्रविधिमैत्री बन्यो नेपाल एयरलाइन्स, भित्र्यायो नयाँ अत्या*धुनिक सफ्टवेयर !!